सामसुङले किन गर्‍यो एप्पलको ट्रोल ? – जन बिहानी राष्ट्रिय मासिक
September 22, 2021 जन बिहानीLeaveaComment on सामसुङले किन गर्‍यो एप्पलको ट्रोल ?
काठमाडाैँ, असाेज ६ गते । सामसुङ र एप्पल संसारका सबैभन्दा ठूला दुई प्रविधि कम्पनीहरु मात्र होइनन् एक अर्काका तिव्र प्रतिस्पर्धी पनि हुन् । को भन्दा को कम भन्दै उपभोक्तालाई उत्कृष्ट प्रडक्टहरु उपलब्ध गराउने प्रयास दुबै कम्पनीले गर्दै आएका छन् ।